UFrosler uthi iChiefs kumele iyigodle injabulo okwamanje
Ukubhekana neWydad Athletic yinto ehlezi inzima, kodwa kumdlali weChiefs osemncane, uReeve Frosler kunzima kakhulu. UFrosler uthi okwenza kube nzima wukuthi yize sekusele kancane baqophe umlando, abakwazi ukukujabulela lokhu.
Angithi kumele bakhohlwe yizinti eziningi bese begxila emdlalweni nasekutholeni umphumela ozobawezela kowamanqamu kwiCAF Champions League. IChiefs izibeke ethubeni elihle lokufika kowamanqamu ngesikhathi ishaya iWydad ngo 1-0 ekuhambeni.
Injabulo ibhalwe ebusweni ke kubalandeli baleli qembu njengoba selihambe ibanga elide kanje kulo mqhudelwano eliwuqale kungabhekwe lutho kulo. Kodwa le Njabulo uFrosler uthi kumele igcine kubo abalandeli okwamanje.
“Kunzima (ukugodla injabulo ngento enhle kanje), kodwa kumele sibeke imiqondo emdlalweni, singazixaki ngokunye. Kumele sikuzibe okushiwo abantu nagaphandle.
“Thina kumele sigxile emdlalweni bese sizama ukuhamba size sibuye naso isicoco,” kusho uFrosler oneminyaka engu-23. Lo mdlali odabuka eGqeberha ungomunye wabadlali beChiefs abenza kahle kule sizini.
“Ngijabule kakhulu… bekungokokuqala ngidlala esigabeni samaqoqo kulo mqhudelwano kodwa manje sesidlulile lapho saze safika emidlalweni eyandulela owamanqamu.
“Yinto enkulu le kimi. Manje sengithole ithuba lokusiza iqembu lihlomule into enkulu. Ngizofaka ikhanda phansi bese ngiqhubeka nokuzikhandla ngoba ngeke wazi ukuthi yini ezokwenzeka ngoMgqibelo,” kusho yena.
Funda nala: AbeChiefs bayakwazi okumele bakwenze ukuqedela umsebenzi kwiCAF
IChiefs isidinga ukudlala ngokulingana nje kuphela ukuze izibekele indawo kowamanqamu. UFrosler uncome ukusebenza kwabo kusakhanya ngokuwina eMorocco.
“Ukuyodlala eMorocco kwakuyinselelo kukodwa nje. Yingakho silindele enye inselelo enzima noma sesiseNingizimu Afrika. Kusazophinde kudingeke silwe. Yinselelo enzima esibhekana nayo endleleni yethu kwiChampions League.
“Sizofaka igeja phansi, siphinde senze konke okusemandleni,” kusho lo mdlali oke wagijima kwiBidvest Wits ngaphambi kokuya kwiChiefs.
Previous Previous post: UMusona ushwebise iChiefs, Pirates neSundowns ebuyela phesheya
Next Next post: Isikhulu sePirates sichitha ekaKomphela kuleli qembu